Winter lixesha ogqibeleleyo ukwakha umlilo ngomsindo, ngokukhuselekileyo hit the kumathambeka, ukwakha snowmen kwaye snuggle ne ikomityi nice yeti. Ngelishwa, ukuba asingabo bonke fun nemidlalo. Winter kukwadala ezinye indlela eyingozi kakhulu iimeko. Ngenxa yokuba akwenzeki ukuba abaninzi bethu ukuba ubusika de spring, apha zi amacebiso oludingayo njani ukuze uhlale ukhuselekile ngoxa uqhuba ebusika.
Yiba Ibonakala: Bopha ilaphu enemibala eqaqambileyo kwi-eriyali wesithuthi sakho okanye beka ilaphu kwi phezulu kwe window Eyisongile ukuba umkhosi. Ebusuku, ukugcina ukukhanya Dome xa kunokwenzeka. Isebenzisa kuphela isixa esincinci sombane yaye iza kwenza kube lula ukuba abahlanguli ukufumana kuwe.
Cima Pipe Exhaust: Qinisekisa umbhobho zeemoto ayikho ugcwale likhephu, ice okanye udaka. Umbhobho exhaust ukuvimbile kunokubangela igesi carbon monoxide ezibulalayo ukuba avuze kungena umkhweli egumbini isithuthi xa injini iyasebenza.
Hlala Ukuncoma: Sebenzisa nantoni na ekhoyo ukuze unombombiya umzimba wakho ukusuka abandayo. Oku kungabandakanya amakhuko floor, amaphephandaba okanye kwiimephu iphepha. Pre-pack zokulala nempahla enzima ukusebenzisa kwimeko yongxamiseko.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/safe-driving-during-winter/ - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)